Ingcebiso: Uyifumana njani imifanekiso yeVector efanayo kwiStock Photo Site yakho ngokuKhangela kweMifanekiso kaGoogle | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 11, 2020 NgoLwesihlanu, ngoDisemba 11, 2020 Douglas Karr
Imibutho ihlala isebenzisa iifayile ze vector ezinelayisensi kwaye ziyafumaneka kwiisayithi zesithombe esitokhwe. Umceli mngeni uza xa befuna ukuhlaziya ezinye izivumelwano kumbutho ukuze utshatise isitayile kunye nophawu olunxulunyaniswa ne iconography esele ikhutshiwe okanye iisimboli.
Ngamanye amaxesha, oku kunokuba ngenxa yengeniso… ngamanye amaxesha abayili abatsha okanye izixhobo zearhente zithatha umxholo kunye nemizamo yoyilo nombutho. Oku kutshanje kwenzeke nathi njengoko sithathe indawo yokusebenzela inkampani kwaye sibanceda ekwakheni umxholo.
Sebenzisa ukuKhangela kweMifanekiso kuGoogle Ukufumana iiVectors ezifanayo kwiSitokhwe seFoto yeSiza
Icebo endifuna ukwabelana ngalo nawo wonke umntu kukusebenzisa ukukhangela umfanekiso kuGoogle. Uphendlo lomfanekiso kaGoogle lwenza ukuba ulayishe umfanekiso kwaye uphendule ngemifanekiso efanayo kwiwebhu yonke. Enye indlela emfutshane, nangona kunjalo, kukuba ungakhangela indawo ethile… njengendawo yokugcina iifoto.
Ndibe lilungu kunye nexesha elide kumthengi Depositphotos. Banokhetho oluqinisekileyo lwemifanekiso, iifayile zevector (i-EPS), kunye neevidiyo kwindawo yazo ezinamaxabiso athile kunye nelayisensi. Nantsi indlela endisebenzisa ngayo uGoogle Image Search ukufumana iivektri ezongezelelweyo kwindawo yabo ezifanisa nesimbo esifanayo.
Umzekelo ongentla, ndifuna ukuthumela umfanekiso wam vector kwifom ye-png okanye ye-jpg ukuyilayisha kuPhando lweMifanekiso kuGoogle:
Uyikhangela njani indawo yeSitokhwe seeFoto ezifanayo
Inyathelo lokuqala kukusebenzisa UPhando lweMifanekiso kaGoogle. Ikhonkco loku likwikona ephezulu ngasekunene kwiphepha lasekhaya likaGoogle.
Uphendlo loMfanekiso kuGoogle lubonelela nge layisha phezulu icon apho unokufaka khona isampulu yomfanekiso onqwenela ukuwukhangela.
UPhando lweMifanekiso kaGoogle ibonelela nge icon yokulayisha apho unokufaka khona isampulu yomfanekiso onqwenela ukukhangela. Kukho ukhetho lokuncamathisela i-URL yomfanekiso ukuba uyazi ukuba uhlala phi umfanekiso kwindawo yakho.
Ngoku Iphepha leziphumo zophendlo lukaGoogle iya kubonelela ngomfanekiso. Inokubandakanya imigaqo yemethadatha efakwe kwifayile yomfanekiso.
Apha kulapho iqhinga likhona… ungongeza parameter yokukhangela ukukhangela nje iwebhusayithi enye usebenzisa le syntax elandelayo:
Ngokukhetha, unokongeza amanye amagama ukuba uyathanda, kodwa andenzi njalo xa ndikhangela iivenkile ukuze ndikwazi ukufumana amathala eencwadi apheleleyo okuhambisa nokukhuphela.
The Iphepha leziphumo zophendlo lukaGoogle iza nokhetho lweziphumo ezifanayo kumfanekiso wokuqala. Unokufumana rhoqo i-vector yoqobo ngaphakathi kweziphumo ngokunjalo!
Ngoku ndingakhangela nje Depositphotos kwezi ziphumo, fumana imifanekiso okanye iilayibrari ezifanayo, kwaye uzisebenzisele uyilo olongezelelekileyo esilwenzela umthengi!
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa ikhonkco lam lokudibana Depositphotos kweli nqaku.
tags: Ukufaka uphawuiifotoEPSUphendlo lomfanekiso kaGoogleIpharamitha yokukhangela kuGoogleumzobiindawo yokukhangelaukukhangela indawoifoto yesitokhweiivenkile zesitokhweiifayile ze vector